Breaking News : Madaxweynihii hore Cali Mahdi ayaa ku geeriyoodey Magaalada Nairobi ee wadanka kenya. – MANABOLYO NEWS
Waxaa maanta ku geeriyoodey Magaalada Nairobi madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Cali Mahdi Maxamed
Maamulka Wargeeska Manabolyo iyo shaqaalahaba waxey halkaan uga tacsiyadeenayaan dhamaan ehelkii uu ka tagey Madaxweynihii hore Cali Mahdi Maxamed, waxaan ilaah uga baryeeynaa in uu ka waraabiya janadul fardowsa ehelkiisan ilaah ka siiyo samir iyo iimaan.
Taariikhdiisa oo kooban halka hoose ka aqriso :
Cali Mahdi Maxamed, wuxuu ku dhashay tuulada cadowuul oo ka tirsa shabeelada dhexe ee magaala madaxda Soomaaliya sanadku markuu ahaa . Cali Mahdi wuxuu wax ku bartay iskoolaadkii Xamar ka jiray. Cali Mahdi 1959 ayaa Qaahira u aaday waxbarasho . Cali Mahdi wuxuu fursad u yeeshay in uu xubin ka noqdo baarlamaanka Somaaliya sanadkii 1969, asagoo noqday qofkii ugu dhalinyaraa ee xubin ka noqda baarlamaanka Soomaliyeed.
Wardeg deg ah : Xaaskii Cali Mahdi wey nooshahay waana been in ay dhimatey